meeydka taliyihii ciimada oo wali baaritaan ku sucdo | ΚÜ šôõ ÐΗΔwΑΑw βìŸΔcΔÞ∑ ↓
meeydka taliyihii ciimada oo wali baaritaan ku sucdo
October 31, 2014 · by biyacade	· in by shaacir shidane.	·
Dowladda Soomaaliya iyo qubaro ajnabi ayaa baaraya Meydka Taliyihii Booliska Soomaaliya Gen, Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil, kaasoo shalay gelinkii dambe u geeriyooday xanuun deg deg ah.
Warar kala duwan ayaa soo baxayay saacadihii la soo dhaafay, kadib markii uu soo shaac baxay geerida Taliyihii Booliska, waxaana jiray warar suuqa la soo geliyay oo ahaa in la sumeeyay Taliyuhu ka hor inta aanu dhiman.
Hase ahaatee wararkaas oo idil waxay u baahan yihiin xaqiiq raadin, waana tan keentay in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya u magacaabo Gudi Wasiiro ah oo soo baara geerida deg dega aheyd ee Taliyihii Booliska.
Dhowr ruux oo uu ku jiro Dhaqtar magaciisa lagu soo gaabiyay Ibraahim ayaa u xiran arrintan, waxaana Taliyaha oo markii hore xanuunsanayay daaweyn ahaan loo geeyay Isbitaalka Umadda, halkaasoo uu markii dambe ku dhintay.
Xalay ayaa meydka Taliyaha oo Frintijeer la geliyay ku hoyday Isbitaalka Digfeer, halkaasoo dhaqaatiir Turki ah ay ku baarayeen.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in maanta lagu wareejinayo meydka AMISOM, lana geynayo Xarunta Xalane, si halkaas loogu baaro, waxaana soo baxaya warar sheegaya suurta galnimada in dibada loo qaado si loo soo baari.
Guddiga Wasiirada ayaa dalbanaya in baaritaanka uu noqdo mid gudaha dalka ka dhaca, si loo ogaado macluumaad, waxaana la sheegayaa in Koox Qubaro ah oo UN-ka ka tirsan inay la wareegi doonaan baaritaankiisa.
Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyay geerida Taliyihii Booliska Soomaaliya Gen. Maxamed Xasan Ismaaciil oo bishii July ee sanadkan loo magacaabay xilkaas, isagoo kala wareegay Taliyihii hore Saacid.
← hadal xikmad ka hadlaya ” Dhib soo socda nin dhag xeeyay iyo nin u dhoola cadeeyay, midna ma dhaafyo”.
Shabaabku Shartoodii Nagala shaafiyaye Yaa noo sheekh ah →